Ndechipi chikafu chakakodzera zera rembwa yega yega? | Imbwa dzeNyika
Susana godoy | | General Imbwa
Kana tiine chipfuwo tinoda kuti ive nezvose zvakanakisisa. Nekuti, Chimwe chinotinetsa chatisingaregi kuva nacho kuziva kuti ndechipi chikafu chakakodzera zera rembwa yega yega, nokuti ichokwadi kuti muchikamu chimwe nechimwe cheupenyu hwako, uchada zvokudya zvakananga uye kuchinja zvatinofanira kufunga nezvazvo.
Ndicho chikonzero mumusika tinowana zvisingagumi zvingasarudzwa uye mhando. Asi pamufungo wechipiri isu tinofanirwa kusarudza izvo zvine zvakawanda zvechisikigo zvinongedzo, zvine hutano uye zvakanyanya siyana. Chinhu chinoitika nacho naku, Semuyenzaniso. Kubva ipapo chete isu tinoziva zvechokwadi izvo furry yedu iri kutora. Kana iwe uchida kugara uchirova chiratidzo uye uine hutano hwesimbi, usarasikirwa nezvose zvinotevera.
1 Chikafu chakakodzera zera rembwa yese: Vana
2 Kudyisa imbwa yechidiki
3 Chii chakanakira imbwa yakakura
Chikafu chakakodzera zera rembwa yese: Vana
Mumavhiki ekutanga ehupenyu, iwe unenge watoziva kare kuti mukaka wezamu uchava chikafu chavo. Vana vembwa vanoida nekuti inovapa zvese zvinovaka muviri zvavanoda kwemazuva avo ekutanga muhupenyu hutsva uhu. Chii chinonyanya kudiwa kugadzira yako immune-mhando yekudzivirira. Mukaka une mapuroteni pamwe chete nekarusiyamu, izvo zvinonyanya kukosha zvinhu.
Ichokwadi icho Kubva pavhiki yechitanhatu kana yechinomwe, vachakwanisa kubatanidza chimwe chinhu muzvokudya zvavo. Ichafanira kuva chikafu chakareruka kana chakanyorova zvokuti vanoshivirira zvishoma nezvishoma. Zvaunogona kubatanidza porridges kune chikafu chakasimba. Inofanira kuitwa zvishoma nezvishoma, nokuti kubva pavhiki yepfumbamwe, inenge, kurumurwa kuchasvika. Nokuda kwechikonzero ichi, mavhiki avo ekutanga akakosha chaizvo, kukwanisa kubatanidza mukaka nezvokudya zvakapfava asi zvemhando yepamusoro. Kubva ipapo chete ndipo patinogona kuvimbiswa kuti vanoramba vachidya izvo zvinovaka muviri izvo zvavanoda zvakanyanya. Bet kune avo vane chimwe chinhu munyama asi rangarira dingindira rekuwedzera mvura.
Kudyisa imbwa yechidiki
Mwedzi mipfumbamwe tinogona kutaura kuti havasisiri vana uye vachakurumidza kuenda kune imwe nhanho maererano nekudya, nokuti kwatiri ivo vachagara vari vaduku vedu. Kunyange zvazvo chiri chokwadi kuti tinofanira kutaura izvozvo marudzi makuru ane kukura zvishoma, saka kusvikira asvika 24 mwedzi tinofanira kugadzirisa kudya kwavo. Pane chikafu chaicho chechikamu ichi.
Izvozvo zvakati, imbwa duku hadzidi zvokudya zvakakora sepamasvondo adzo okutanga ekuberekwa, chimwe chinhu chinoitikawo nemapuroteni. Ndiko kuti, tinofanira kuzvichengeta asi mukati mehurongwa. Zvakanakisa kubheja pazvikafu zvisina simba zvakanyanya, kuchengetedza uremu hwako uye hutano hwako mukati memiganhu yakanaka. Kubva ipapo uye sezvo achiri mudiki, unogona kutanga kusanganisa chikafu chake chembwa nechikafu chembwa dzakura. Ramba uchisarudza iyo yakanyorova mumwedzi iyoyo yekutanga yedanho iroro. Rangarira kuti ticharamba tichibhejera pamhando yekudya. Saka kana iwe uchipokana, ita shuwa kuti resipi inosanganisira chikamu chepamusoro chenyama asi isina mapreservatives kana zvimwewo zvimwewo.
Chii chakanakira imbwa yakakura
Zera rinouya apo zvisingadzivisiki kuti kufamba kwenguva kunowedzera kukuvadza. Zvirwere zvinotanga kuita chitarisiko uye mune mamwe marudzi ivo vanowanzoitika. Dzimwe mhuka dzinotanga nekufamba zvishoma uye kugaya kwadzo kunononokawo. Saka huwandu hwemafuta hunogona kuva humwe hwematambudziko ako makuru. Chokutanga pane zvose, tichasarudza chikafu chakakodzera chezera rega rega rembwa, zvakare. Muchiitiko ichi, inenge iri iyo iri nyore kugaya.
Panguva ino zvinokurudzirwa kushanyira vet zvakanyanya kutibatsira pakati pezvirwere nekudya kwavo. Asi sekutonga kwese tinogona kukuudza kuti iyo chaiyo uye Senior mhando chikafu chine nyore kugaya, pamwe ne yakakwirira mumavhitaminzi akadai sephosphorus uye zvimwe zvinovaka muviri zvakaita se antioxidants. Nekuti zvese izvi zvichaita kuti imbwa yedu ive nezvinovaka muviri zvakachinjirwa kuzera rake. Zvakare, vanobheja nyama, asi zvishoma pazviyo. Nguva dzose pasina kuwedzera sezvatakambotaura. Unodyisa sei imbwa yako?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Ndechipi chikafu chakakodzera zera rembwa yega yega?
Iwo akanakisa mawiricheya embwa kuti dzivandudze kufamba kwadzo